हेलिकप्टर दुर्घटनाका मृतकको ‘एन्टीमर्टम’ का लागि परिवारको नमूना संकलन जारी, पोस्टमार्टमलाई समय लाग्ने – Health Post Nepal
दुर्घटनाका मृतकहरुको शब जलेर पहिचान गर्न नसक्ने भएसँगै विशेष खालको पोस्टमार्टम ‘एन्टीमर्टम’ गर्नुपर्ने भएकोे समय एकीन गर्न नसकिने विज्ञहरुले बताएका छन् । ‘एन्टिमर्टम’ प्रक्रिया पोष्टमार्टम भन्दा फरक हुने भएकाले पहिचान गर्न एन्टीमर्टम डेटा कलेकसन गर्ने काम भैरहेको शिक्षण अस्पताल फरेन्सिक विभागका प्रमुख फरेन्सिक विशेषज्ञ प्रा.डा. हरिहर वस्तीले बताए ।
डा. बस्तीका अनुसार लाशहरु पूर्ण रुपमा नचिनिने अवस्थामा मृतकका परिवारको डाटा लिएर सबै लाशको डाटा लिएपछि मात्र परिक्षण सुरु हुन्छ । रातिसम्मै डाटा संकलनको काम भैरहेकाले समय लाग्ने भनाई चिकित्सकहरुको छ ।
सडक दुर्घटना या अन्य दुघर्टनामा जस्तो नभएकोले यस्तो पोटमार्टममा समय उनले बताए । जटिल खालको अवस्थामा सबै लासको प्रकृति पहिचान नहुने र पुरै डढेको अवस्थामा भएकाले पहिला लाश पहिचान गर्नकै लागि डाटा लिएर सुस्म गतिमा परिक्षण गर्नुपर्छ ।
सुरुमा लास पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै परिक्षण गरेर परिवारलाई बुझाइनेछ । ‘डाटा कलेक्सनको काम सकेपछि मात्र परिक्षण हुन्छ, डेटा कलेक्सनको काम भइरहेको छ, शुक्रबारसम्ममा परिक्षण प्रकृया पूरा होला’ डा. वस्तीले भने ।